China Caps fekitori uye vagadziri | SJJ
] Kapu haingoshandisirwe kuchengetedza zuva, zvakare chinhu chemafashoni. Yakanaka yekusimudzira uye semafirimu, anime zvigadzirwa zvepamhepo. Tinogona kupa mhando yepamusoro makapisi kune dzimwe nguva dzakakosha uye zviitiko. Unhu chaihwo nemitengo yakachipa zvakare inowanikwa, kune mamwe mapurojekiti ane mutengo wakanangwa saka tinogona kupa akanakisa mazano.
Capshaisi kungoshandiswa chete kurega zuva, zvakare chiri chinhu chemafashoni, chakanakira kusimudzira uye semafirimu, anime zvigadzirwa zvepariperi. Isu takapa vatengi vazhinji, vazhinji vacho vanohodha ngowani dzemafirimu ane mukurumbira uye anodhinda kambani marogo ndokuzopa makapeti aya kumatanda avo, anoenderana nemasutu ebasa ravo. Uye makapeti anozivikanwa kune vamwe makwikwi emitambo, kushambadzira mushandirapamwe, mishandirapamwe yesarudzo. Vana vanofarira ngowani, vakadzi vanofarira nguwani, varume vanofarira machipisi, vanhu vakuru vanofarira ngowani. Caps inokodzera mhando dzese dzevanhu pasirese. Tinogona kugadzira makapeti mune akasiyana maumbirwo akasiyana akasiyana masizi, senge repamberi kureba, brim saizi, kutsigira maburi, tambo mabhendi, emukati mabhendi, yekusona mitsara, yepamusoro bhatani zvichingodaro. Iwo marogo anogona kuve akagadziriswa nenzira dzakasiyana, dzakasiyana maumbirwo kana saizi. Navy bhuruu, chena, nhema, tan, burgundy, yero inowanzo kuve yemakepisi. Iyo jira kana zvimwe zvinhu zvehombodo zvinogona kuve zvakasiyana zvichienderana nezvinodiwa nevatengi, kusangana nemhando dzepantone. Makapeti edu ndeemamiriro ekunze kusangana nemuyedzo muyero weEU kana USA.
Tinogona kupa mhando yepamusoro makapisi kune dzimwe nguva dzakakosha uye zviitiko. Hunhu chaihwo nemitengo yakachipa zvakare inowanikwa, kune mamwe mapurojekiti ane mutengo wakanangwa isu tinogona kupa akanakisa mazano. TINOGONA kupa mhinduro yakanakisa yemapurojekiti ako nehunyanzvi kutaurirana uye kukwikwidza mitengo.
Sarudza isu uve mumwe wako, tora mazano akanakisa.
Chinyorwa: Canvas, donje, polyester, polyester-donje, denim, acrylic fiber, nylon, mesh machira, PU, ​​dehwe.
Style: 5 kana 6 ukomba, maererano vatengi 'Specification
Saizi: Saizi yevakuru ndeye 58 ~ 62 mm, saizi yemwana iri 52 ~ 56 mm
Chirongwa cheLogo: Silkscreen anodhinda, kupisa kupisa, sublimation, kusona PVC / embroidery / PU logo, zvipfeko, zvinhu zvakaomarara uye nezvimwe
Kumashure saizi yekugadzirisa chinongedzo: Velcro, plastiki bhureki, simbi bhureki, yakasungwa bhendi uye zvichingodaro
Hapana MOQ inogumira
Pashure: Wooden Yekusimudzira Zvinhu
Zvadaro: Poker Chips